”Baahidii & busaaraddii aan kusoo barbaaray ayaa iga caawisay inaan noqdo horyaalka Olombikada” – Mo Farah (Qaybtii 1-aad) – Gool FM
”Baahidii & busaaraddii aan kusoo barbaaray ayaa iga caawisay inaan noqdo horyaalka Olombikada” – Mo Farah (Qaybtii 1-aad)
Raage July 26, 2016
(London) 26 Luulyo 2016 – Mo Farah ayaa sheegay in faqrigii iyo busaaraddii uu kusoo barbaaray ay ku dhiirri gelisey inuu noqdo laacib heer caalami ah oo ka qayb gala orodada dhaadheer.
Horyaalkan, oo markale meteli doona Great Britain marka ay bisha soo aadda Rio de Janeiro ka furmaan ciyaaraha Olombikada kulaalaha, ayaa kusoo koray Soomaaliya, isagoo guro doqosh ah la wadaagi jirey 7 qofood oo qoyskiisa ka tirsanaa.
Balse mar uu waydiiyey Radio Times inuu labaaleey dahabi ah Olombikada ka qaadan lahaa haddii uusan soo mareen nolosha dhibka badan ee soo martay wuxuu ku af celiyey: “May. Waxay ila tahay inay taasi tahay waxa sare ii qaaday. Iyadaa i gayeeysiisey, waana inaad dadaashaa.”
Farah , oo dhowaantan gurigaasi booqday mar la duubayey dokumenteri ay sameeynaysay BBC One ayaa noloshii adkayd ee carruurnimadiisa ka yiri: “Ilaa iyo inta aad haysato wax uun aad cunto, misna aad neefsanayso, waxay ahayd nolol wanaagsan. Wax intaa ka badani may jirin. Fursado may jirin.”
“Carruur ahaanteennii, boombale ma haysanin – waxaannu ku ciyaari jirney bullaacadaha, waxaannu ku ciyaaraynay wixii aanu heli karney. Gurigii aan kusoo koray wuxuu ahaa mid aad u yar – annagoo siddeed ah, ayaannu qol qura isla seexan jirney.
“Haddii aad aragto halka aan haatan ku noolahay, farqi wayn baa jira, waana ku faraxsanahay maxaa yeelay waxaan dadka tusi karaa in haddii aad dadaasho aad guul gaari karto.” ayuu yiri Maxamed Faarax.
La soco qayb kale………
AQRISO: Wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga qoray suuqa kala iibsiga
TOOS u daawo/dhegeyso: Jubbaland vs Puntland - LIVE